Wenqatshelwe ibheyili 'owafaka izidumbu epotimendeni'
AMALUNGU omphakathi nabazalwane abebebhikisha ngaphandle kwesango leNkantolo yeMantshi ePinetown, izolo Isithombe: MBALI KHANYILE
INKANTOLO yeMantshi yasePinetown, ikuhoxisile ukufakwa kwesicelo sebheyili sikaMnuz Sthembiso Lamula (31), othinteka ecaleni lokubulawa kukaNkk Smangele Simamane ( 39) nendodakazi yakhe, uSbongakonke Mthembu (12) baseNewslands East, okwatholakala izidumbu zabo epotimendeni eduze komfula, KwaDabeka.
Imantshi, uMnuz Kunene, esingakwazanga ukuthola igama layo, itshele inkantolo izolo, ukuthi ukungabibikho kwekheli lesibili likamsolwa yikho okuholele ekutheni ithathe isinqumo sokuhoxisa ukufakwa kwesicelo sebheyili sikamsolwa.
Ithe umsolwa ozobuyela ngoMeyi 31 kule nkantolo, uzoqhubeka agcinwe esitokisini.
Umndeni kaMnuz Senzo Simamane (ongumyeni kamufi) nomndeni wakubo kankosikazi wakhe, ubuphelezelwe ngamalungu omphakathi nabazalwane bebandla lamaZayoni abebefake izivatho.
La malungu omphakathi nabazalwane bebegcwele ngaphandle kwesango, bebhikisha nezingqwembe ebezibhalwe imiyalezo ebizwakalisa izikhalo zabo ngokuhlukunyezwa nokubulawa kwabantu besifazane nezingane.
UMnuz Simamane okhihle isililo ngenkathi ehlangene namalungu omphakathi nabazalwane abebeyobaseka, uthe isifiso sakhe wukuthi umsolwa ajeze ukuze kuphume iqiniso.
“Le nto ingihlukumeze kakhulu ezinyangeni eziyisithupha ezedlule njengoba abanye abantu bese becabanga ukuthi yimina owabulala umkami nengane. Besekunzima kakhulu, ngingasakwazi nokudla. Bengingena ngiphuma ezibhedlela ngenxa yokhwantalala,” kusho uSimamane.
Ikhansela lendawo, uNkk Gugu Zulu, ebelihamba namalungu omphakathi, lithe isifiso salo wukuthi bembulwe izinqe bonke abathinteka kuleli cala, ukuze umndeni ukwazi ukudlula esimeni obhekene naso.
“Sibone kubaluleke kakhulu ukuthi siphume ngobuningi bethu, sizokweseka umndeni njengoba ungenakho ukuthula emoyeni. Sikhathazekelile futhi sihlukumezeke kakhulu ngalesi sigameko,” kusho uNkk Zulu.